အချိုများများစားရင် ကင်ဆာဖြစ်မှာလား - Hello Sayarwon
အချိုအရသာကို လူတိုင်းနီးပါး နှစ်ခြိုက်သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ သကြားဟာ အချိုဓာတ်ရရှိစေတဲ့ အဓိက အရင်းအမြစ်တစ်မျိုးပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် သကြားဓာတ်ရစေတဲ့ သဘာဝ အစားအစာတွေရှိပါတယ်။ အသီးအနှံတွေကနေရတဲ့ fructose၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေရတဲ့ glucose၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကနေရတဲ့ lactose နဲ့ ပေါင်မုန့်တို့၊ ဆန်တို့၊ ပါစတာတို့ကနေရတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် စတာတွေပေါ့။
ချိုမြိန်တဲ့ အရသာရရှိဖို့အတွက် သကြားကို အသုံးချပြီး အစားအစာအမျိုးမျိုး ဖန်တီး ပြုလုပ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလို အစားအစာတွေ ဖန်တီးပြုလုပ်ကြရာမှာ သဘာဝသကြားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဆေးသကြားပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးမျိုးအထွေထွေသော သကြားတွေကို အသုံးချကြလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေရဲ့ သကြားစားသုံးမှု ပမာဏဟာ မက်ထရစ်တန်ချိန် သန်း ၂၀၀ နီးပါးအထိ ရှိပါတယ်။
ဒီလို လူသုံးများ လူကြိုက်များလှတဲ့ သကြားဟာ လူ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်မျိုးတွေကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေမှာ မကြာခဏ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကြားဖူးသိဖူးတယ်ဆိုသော်ငြား သုံးစွဲမှုကိုတော့ လျှော့ချနိုင်ကြခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ သုံးစွဲမှု ပမာဏက တိုးပွားလာနေဆဲသာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ပြောရရင် သကြားကို အလွန်အကျွံ စားသုံးရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက အမှန်ပါပဲ။ ပိုပြီး သေသေချာချာပြောရမယ်ဆိုရင် သကြားကို အလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင် သွေးတိုး၊ ဆီးချိုဝေဒနာတွေ ခံစားရဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါဆိုးတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကပ်ငြိလာအောင်လည်း သကြားက တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
သွေးထဲမှာ အင်ဆူလင်ပမာဏ မြင့်မားလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းတွေဟာ သွေးတွင်းမှာ ရှိတဲ့ သကြားဓာတ်ပမာဏနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကြောင့်ပါ။
သကြားစားရုံနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်မှာလားလို့ အံ့သြတကြီးမေးချင်မေးကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ သကြားဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တွန်းအားတစ်ရပ်ဆိုတာကို ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာလက်ခံထားကြတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တိုက်ရိုက် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြချက်မျိုးတော့ မရှိထားပါဘူး။
အရေးအပါဆုံး သက်သေ သာဓက ကတော့ သွေးတွင်းကို သကြားဓာတ်ရောက်ရှိသွားချိန်မှာ သာမာန်ဆဲလ်တွေက ရယူတဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏထက် ကင်ဆာဆဲလ်တွေက ရယူတဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏဟာ အဆ ၂၀၀ အထိ ကွာဟပါတယ်။ ဒါကြောင့် သကြားဓာတ်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သာမန် ဆဲလ်တွေထက် အဆ ၂၀၀ ပိုမိုသန်မာအားကောင်းလာအောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကင်ဆာကျိတ်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ သကြားအများအပြားစားဖြစ်မယ်ဆိုရင် အကျိတ်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားအောင် ပံ့ပိုးပေးသလို ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သကြားဓာတ်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လည်ချောင်းကနေစပြီး အစာအိမ်အထိ အစာလမ်းကြောင်းတလျှောက်လုံးက အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ မြင့်အားအောင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ သကြားဓာတ်များတဲ့ အချိုရည်တွေ ပုံမှန်သောက်သုံးသူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၇၀% ပိုမြင့်မားတယ်လို့ သုတေသနရလဒ်တစ်ခုက ဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုသိထားဖို့လိုတာက သကြားလျှော့စားတာမျိုး၊ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ကို လျှော့ချတာမျိုးပြုလုပ်ရုံနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
အမေရိကန် ကင်ဆာအသင်းရဲ့ အသိပေးချက်တွေအရလည်း သကြားအလွန်အကျွံစားသူတွေ ကင်ဆာဝေဒနာ ခံစားကြရတဲ့ အဓိက အချက်က အဝလွန်ခြင်းကြောင့်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ သကြားက ဝစေပြီး အဝလွန်လာခြင်းကြောင့် တခြားဘေးဥပါဒ်တွေကိုပါ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
သကြားကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်တာမျိုး တိုက်ရိုက်အခြေအနေတော့ မရှိဘူးလို့ အဆိုပါ အသိပေးချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းကြောင့် ရင်သားကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာအပါအဝင် ကင်ဆာအမျိုးအစားပေါင်း ၁၃ ခုလောက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးတော့ တစ်ချို့ကင်ဆာတွေဟာ သကြားစားသုံးခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်မှုမရှိကြပါဘူး။
ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားတယ်လို့ အများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။ တိုက်ရိုက် မဖြစ်ပွားစေနိုင်ပေမယ့် ဖြစ်ပွားအောင် တွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်း သက်သေတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သကြားတွေ၊ ချိုတဲ့အစားအစာတွေ ဆက်ပြီးစားသင့်မစားသင့် လူအတော်များများက စဉ်းစားလာကြမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
သကြားဆက်မစားတော့ဘူးလား? မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Bubble Tea လေးမြင်ရင် အချိုရည်ဘူးလေးမြင်ရင် ကိတ်မုန့်လေးမြင်ရင် အဲ့ဒီစိတ်တွေ အကုန်လွင့်ပါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပုံမှန် စစ်ဆေးနေပြီး သကြားစားသုံးမှုကို လျှော့ချဖို့ပါပဲ။
လုံးဝဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးလှသလို တခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တာမို့ လျှော့ချစားသုံးတာဟာ အစွန်းနှစ်ဘက်လွတ်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ခံတွင်းအနံ့ဆိုး တာကို သက်သာစေမယ့် သကြားလုံး
သကြား ဓာတ်ညွှန်းကိန်း (Glycemic Index)
ရုတ်တရက် ဝိတ်ကျသွားတာဘာကြောင့်လဲ? ကင်ဆာကြောင့်လား?